Monitor Yima, yeCwecwe Yimani, Yimani Phone, Yima Laptop - ShengDi
Ikhibhodi & Mouse eyongezwayo
Ekhaya & Kitchen
Thina SAMDI, siya kuthatha ukusetyenziswa yohlobo bamboo kunye neenkuni kwindalo ukuba efanayo iphelele izincedisi ze-elektroniki, ukuvelisa iimveliso yenkcubeko ezinamagama, ubugcisa kunye ezizodwa. Bamboo yethu kunye izincedisi eyenziwe ngomthi unalo isimbo, bonke ubuhle bayo. Iziqwenga yeplanga babe inzuzo ngakumbi ukuba nokusingqongileyo kunye uluhlu ifanitshala izincedisi ezikhoyo obanzi kakhulu ngakumbi. iziqwenga Original somthi ziya kuhambelana ekhaya wonke kunye nakuyo yonke igumbi ekhaya.
Iliso Yima Nge Ityesi
SAMDI, i umenzi ezintsha oqeqesho ophezulu ...
Anut Laptop Yima
Anut Monitor Ima
SAMDI yindawo enkulu ukufumana ubutyebi obufihliweyo. Thina strong Design kunye neMveliso Team.We sizibophelele iimfuno zabathengi bethu kwaye ziphuhlise imveliso ezizodwa kwaye sinomdla ngokhuseleko abathengi bethu ekubeni izinga ... YOPHANDO
No.1916, iZiko loPhuhliso, Southern China City, Pinghu Town, Longgang District, Shenzhen, China
© Copyright - 2019-2022: All Rights Reserved. Products Guide - iimveliso lifakwe - Tags Hot - Sitemap.xml - AMP Mobile
Wooden Laptop Yima For Desk, Wooden Omega Headphones Stand, Iphone Charging Standards, eyongezwayo headphone, Phone Stand Wood, Imac Keyboard Holder,